Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Shirkii Gumeysigu ku qabsaday Safarada London iyo Banaanbaxi Xooga badnaa ee lagaga hortagay!
Warbixintii Shirkii Gumeysigu ku qabsaday Safarada London iyo Banaanbaxi Xooga badnaa ee lagaga hortagay!
#Shirkii Gumeysiga oo lagasoo dareeray
#Gumeysiga oo amar kusiiyay Xawaladaha Somaliyeed inay lacag ugu-deeqaan Ethiopia
#Banaanbaxyaashi oo balan qaaday in Mar danbe Danbilayaal imaan donin UK.
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka UK ayaa fashilisay Qorshe ay taliska TPLF ay rabeen inay lacag kaga arruursadaan Xawaaladaha Somaliyeed iyo Ganacsatada somalida ku dhaqan wadamada ree Galbeedka. Waxa Taliska Gumeysiga Ethiopia uu qabtay kulan ay ugu yeedheen dhamaan somalida Jamuhiraydi Xorta aheyd waxaana kulankaas kusoo dhamaaday fashilaad. Kadib Markii Jaaliyada Somalida Ogadeniya ay is hortaagtay kulankaas Banaanbax aad uxoog badana ay ku qabteen Safaarada Gumeysiga Ethiopia ku leedahay Magaalada London.
Waxa banaanbaxaas isugu soo baxay dad gaadhaya 500 q0f oo isugu jira caruur, haween, waayeel, culumo iyo aqoonyahanka Somalida Ogadeniya oo ku dhawaqaya Gumeysiga dooni meyno, Xoriyad ayaan rabnaa. Males Zenawi ha dhaco. Waxa dadka mudaharadayay ay soo bandhigeen oo ka hadleen xasuuqa ka socda Ogadeniya oo ay ku eedeeyeen in Ra’isal wasaraha Ethiopia masuul ka yahay. Sidoo kale kuwa u adeegaya oo hormuud u yahay cabdi UBO ayaa lagu eedeyay in xasuuqa Ogadeniya ay kaqeyb qaateen oo dacwado lagusoo oogi doono.
Masuul ka tirsan Jaaliyada Manchester ee wadanka UK ayaa sheegay in ay dhamaatay waqtigii ay danbilayaashu ay soo gali jireen UK hadana ay iska baxi jireen. Waxa aan la tiigsaneyna sharciga waxana uu ubalan qaaday shacabweynaha Somaliyeed in aysan dib ugusoo noqon doonin Danbilayaasha Xasuuqa ka geystay Ogadeniya inay si xor ah ku yimadaan Ingiriiska, waxa ay la kulmi doonaan xidhay iyo maxkamad. waxa sidaas yiri Cabdi Cade oo ah aqoon yahan ka tirsan Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka UK.
Banaanbaxan ayaa waxa kale oo dadkii mudaharadayay oo wareysiyo ka qaadnay waxaa kamid ah mudane ka hadlay dadka shirka gumeysiga ee safaarada kasocda dadka ka qeyb galay inaysan aheyn shacab matali kara Somalida Ogadeniya. Waxase ay yihiin ayuu yiri dad tiro yar oo nolosha ka dhacay oo badankoodu yihiin dad Haashka Sigaarka iyo Caqaarta jaadka ah ka baryootama Southall. Dadkaas noocaas ah ee Caawa waxay ku casheeyaan heysan- maxay gadan karaan oo Biyo Xidheen lacag lagu maalgaliyo ay ku tari karaan. Dadka Somalida Ogadeniya waa kuwan mudaharadaya ee ka dhiidhinaya xasuuqa ka socda Ogadeniya. Sidaas waxa yiri Jacfar oo ah Gudomiyaha Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Magaalada Birmingham.
shirkan uu gumeysigu soo abaabulay waxa kasoo qeyb galay dad kasocda Jamuhuriyada Somaliya ee xorta aha kuwaas oo Gobolo aaminsan haddii ay xidhidhka ay la leeyihiin Gumeysiga Ethiopia ay wanaajiyaan inay ka helayaan aqoonsi iyo taagero. Dadka ay gumeysiga Ethiopia xooga saartay ee shirka kasoo qeybgalayna waxay ahaayeen dadkaas Goboleysiga ah ee Jamuhiriyadi Somaliya kasoo jeeda.
Shirkan ayaa ahaa mid fadeexad ka raacday gumeysiga waxaana hirgali wayday qorshihii ay wateen ee lacagta lagu aruurinayay. Waxa ugu horeyntiiba laga codsaday dadkii inay ku yaboohaan lacag. Waxaana shirkii dhacday in la aamuso. Dadka Somaliyeed ayaa markii hore aad moodaysay inaysan ogayn Agendaha shirka. waxaana dhacay in dadkii is eegeen markii lasoo hordhigay qorshihii dhaqaale aruursiga. dadka shirkan kasoo qeyb galay oo markii horeba aad u yaraa ayaa waxa bilaabantay in dadkii ay shirka isaga soo baxaan. oo mid mid loo soo fakado.
Ninkamid ah dadkii gudaha galay oo banaanka noogu waramay ayaa noo sheegay In hadda ka hor Ethiopia balan qaaday shirarkii hore inay nasiinayaan dhul aan maal gashano iyo investment. Hadda waxa aan rajeynaynay in aan ka faa ideysan karno balse anagii ayaaba lacag lana weydiistay. Meesha hunguri ayaan u tagnay iyo inaan wax kasoo helno. Ninkale ayaa isaguna noo sheegay in meesha uu dhuuni u doontay balse uu kasoo wayay, aniga qofkii wax isiiya ayuunbaan raacaya. kuwa banaanbaxaya hadi ay lacag i siiyaan waan la banaan baxaya. eega se waan kusoo hungownay shirkan. Ethiopia lacag uma heyno. Dadkayaga oo ay layso iyo lacag la isuguma dari karo sidaas uma liidano ayuu yiri ninkani.
Waxa noo sii suurto galiwaysay inaan dadka soo baxaya shirka aan wax weydiino, iyaga oo ka cabsanaya dadka banaanbaxaya inay waxyeelaan. Iyo Poliska oo aadu ilaalinaya dadka safaarada kasoo baxa maadama dadkii mudaharadayay ay aad u xoog badnayeen oo laga cabsanayay in dhibaato ka dhacdo.
Kadib shirkii markii sidii ay rabeen u hirgali waayay Waxa Gumeysigu uu amar kusiiyay Xawaaladaha Somaliyeed in xawaalad kasta oo Somaliyeed inay bixiso dhaqaale xoog badan oo ay ugu yaboohayso biyo xidheenka. Qorshahan gumeysiga ayaa laga yaaba in xawaaladaha Somaliyeed ay ka xidhaan Wadankooda sidii ay hadda ka horba kusameyn jireen. Hadii dhaqalahaas ay siin waayaan Gumeysiga.
Shacabka Somaliyeed ee ku dhaqan magaalada London ayaa taagero buuxa siinaya jaaliyada Somalida Ogadeniya.
Lasoco Filimaan iyo Xogag dheeraad ah uu ku aadan shirkaas. barito.